Shiinaha OEM Laser Calaamadeynta Mashiinka iyo Soo-saaraha Warshadda | JCZ
Shiinaha OEM Laser Marking Machine Manufacturer and Factory
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Loogu Talo Galay Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka taxanaha ah ee loo yaqaan 'Thin and Thick Film Trimming Trimming Mashiinka Mashiinka Mashiinka' laser-ga ah oo taxane ah oo loo yaqaan 'SharpSpeed ​​Precision' (A 100% shirkad hoosaad ka ah JCZ) oo loogu talagalay suuqa jarista waxqabadka leh. Waxay ku samayn kartaa jarista laser-ka saxda ah ee xuduudaha ku habboon ee wareegyada isku-dhafan ee filimada kala duwan / filimada qaro weyn. Waxay ku habboon tahay jarista laser-ka dareemayaasha cadaadiska, dareemayaasha hadda jira, dareemayaal sawir qaade ah, xeedho, attenuators, iyo alaabooyin kale. M ...
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka - Mashiinka Shiinaha - TS4410
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka - Mawduuca Sare - TS4410 Qalabka Tilmaamaha Sare ee TS4410 ee mashiinka jarista laser-ka ee dareeraha mitirka / barokaca ayaa loo sameeyay qalabka diidmada iyo suuqa qiiqa barakaca qumman. Mashiinka jarista saxda ah ee laser-ka kaliya ma awoodo inuu yareeyo xariiqa toosan ee iska caabiyaha, laakiin sidoo kale inuu yareeyo iska caabinta buuxda ee iska caabiyaha isla waqtigaas. Qalabkan waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa jarista laser-ka dhammaan noocyada saxda ah ...